ကျနော်တို့ကတကယ်တော့မြည်းကိုစားချင်တာကဘာလဲဆိုတာယောက်ျားတွေကိုမေးပြီးသူတို့ကမလုံလောက်ဘူး - သတင်း
အရာရာတိုင်းအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အမြဲရှိတယ်, ငါတို့အချို့သည် outlandish kinks ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bandwidth ကိုတိုးချဲ့ဘူး။ ငါမြည်းစားခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ကြုံခဲ့ရစဉ်ကလုံးဝအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ အချို့လူများကအသစ်သောအရာတစ်ခုကိုလိုလိုလားလားရှိကြသည်။
ငါသွားပြီးမြည်းစားခြင်း၏အတွေ့အကြုံကသူတို့အတွက်မည်သည့်အရာနှင့်တူကြောင်းယောက်ျားများအားမေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုတုံ့ပြန်မှုများကသင့်အားပါးပြင်ပေါ်သို့ဘရာဇီးမှဖယောင်းတိုင်များဖြန့်ရန်သင့်အားစည်းရုံးလိမ့်မည်။ သွားပြန်ပြီ။
ဒါဟာမှာအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသော်လည်းအရသာအကြောင်းကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်မလေးကိုကျေနပ်လောက်အောင်လုပ်ပေးရင်အဲဒါကိုငါလုပ်ပေးမယ်။ ငါဒီမိန်းကလေးရဲ့မြည်းကိုစားခြင်းနှင့်သူမ၏လက်ချောင်းနေတဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်။ သူမငါ့ကိုမိုးရွာစေခဲ့တယ်။
တစ်ချိန်ကမြည်းကိုစားခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါသည်လည်းတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု A1 ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည်! ငါဖုန်အပြည့်အဝအနက်ရောင်အပေါက်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးစင်ကြယ်ရဲ့အဖြစ်ကပဲအခြားအစာစားခြင်းနှင့်တူ၏။ ဒါဟာတင်းကျပ်စွာရဲ့, ကအရေပြားနဲ့တူအရသာမရှိအရသာမရှိပါ။ အဲဒီမှာမဖြစ်သင့်ပါ။
ငါအမှတ်အသား ruffalo ရဲ့မြည်းကိုစား tryna တယ်ဒါပေမယ့်လေးစားမှုလမ်းအတွက်
- Ash Tapp (@ashtapp) ပြီလ 27, 2018
လက်သီးတစ်ချောင်းလုပ်ပါ၊ ထို့နောက် ur လက်ညှိုးအလယ်၌ ur လျှာကိုကပ်ပါ။ ဒါပဲ။ ပါးစပ်နဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုကြိုက်တယ် ထိုက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အမျိုးသမီးကအဲဒီထဲကိုဝင်လာရင်ငါခံစားရတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးစအိုယူနိုက်တက်သည်အတိုင်း, ကပေးသူအဘို့အပျြောမှေ့စနှင့်လက်ခံသူမှနက်ရှိုင်းစွာပျြောမှေ့စနိုင်ပါတယ်။ ငါနှစ်ယောက်စလုံးပါ ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်ရေပူစည်ပြီးနောက်တွင်၊ နှစ်သက်သောသူသည်အဆင်ပြေလျှင်။
အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်စအိုကိုစူးစိုက်မှုကိုအာရုံမစိုက်စေလို။ လေးစားလိုက်နာပါ။ သို့သော်ကြယ်များသည်ဤသို့ပြောနိုင်ရန်ချိန်ညှိသောအခါပျော်မွေ့ပါ။ ထိုသို့လုပ်ခြင်း၏ရငျးနှီးမှုမြားကိုခံစား။ ၎င်းအနေဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားယူဆောင်လာသည့်ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားပါ။
ဒါဟာဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုစားသကဲ့သို့! ငါကအစာစားခြင်းမှပျော်မွေ့။ တစ်ချိန်ကငါမစားမီမိန်းကလေးတစ် ဦး ၏မြည်းကိုဆီနှင့်ငါသူမ၏လျှာနှင့်သူမ၏တက် lather ဖို့ရှိသည်မဟုတ်နိုင်အောင်။ သင်၏လျှာကြွက်သားများသည်ခဏတာပင်မောလာသည်။
ဒါဟာမှော်ပါ! ဒါဟာ pussy ကိုစားတာနဲ့တူတယ်၊ သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့မြည်းလည်းစားရတဲ့ရတဲ့ကိုချစ်။
ငါအမြဲတမ်းစမ်းကြည့်ချင်ခဲ့တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတွေးကငါ့ကိုတကယ်ဖွင့်ပေးလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာငါလိုပဲမင်းရဲ့မြည်းကိုငါစားနိုင်မှာလား။ ပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တာကသူမဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ သူမခံစားခဲ့ရမယ်ဆိုတာသေချာပေါက်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူမအကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူမဘယ်လောက်အထိချစ်သလဲဆိုတာကိုသူမမျက်လုံးကိုငါ့မျက်လုံးထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ဟုတ်တယ်ငါမြည်းကိုစားတယ်ဟုတ်တယ်ငါမြည်းစားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်သလား။ မကသူကပြောတယ်။
- ငါတို့အကြား (@TheStevenCyrus) ပြီလ 22, 2018
ငါ့ရည်းစားကိုငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ထိုအခါငါကတည်းကသူမ၏အကြိမ်တစ်ခုလုံးတစည်းကပြုပြီးပြီ, နှင့် (အချက်အနားမှာ) သူမကသူမ၏ clit ပွတ်တိုက်နေစဉ်သူမ၏မြည်းကိုစားခြင်းမှငါ့ထံမှတကယ်ကြီးမားတဲ့အော်ဂဇင်ရှိခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းရဲ့မြည်းကိုငါမစားနိုင်ဘူး။ ကျနော့်အမြင်တွင်၎င်းကိုသွားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်သူမ၏အပေါ်သို့ဆင်းသွားပြီးသူမကိုနည်းနည်းရူးသွပ်သွားစေပြီးပထမတွင်သူမကိုတစ်ချိန်ကလျက်လျက်နေသည်။ သူမသည်သူပဲခဲ့ ... စဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ... ခဲ့သလဲ ဒါပေမယ့်မင်းကသူမရဲ့ pussy ကိုစားနေတုန်းပဲ၊ ဒါဆိုသူမခံစားနေရတယ်၊ ထို့နောက်နည်းနည်းပြန်သူမ၏မြည်းသို့ပြန်သွား သုတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လုပ်ပါ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကြာကြာအဲဒီမှာနေပါ။ ဒါကမှမရှိအားလုံးပါပဲ။
Ari Bines အားဖွငျ့ဖွစျသညျ